Matte Black Ikhishi ompompi Imihlahlandlela Ehlanzekile
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ungazihlanza Kanjani ompompi Abasekhishini Abamnyama
2021 / 01 / 28 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 8002 0
IMatte black ingesinye seziqedelo zesimanje endaweni yesehlakalo ompompi nezinye izinto zasekhishini nezokugezela, futhi idumile. Phakathi kombala ogqamile ngokumangazayo kanye nobukhazikhazi besiphetho se-matte, la mathinta ithandwa emakhaya emhlabeni wonke.
Vele, ngemuva kokufakwa kompompi bakho, ufuna ukuqiniseka ukuthi bahlala bebukeka kahle kakhulu. Lokho kwehlela ukubaphatha ngokunakekela nokusebenzisa imikhiqizo namasu afanele ukuwahlanza. Cabanga lokhu njengomhlahlandlela wochwepheshe wakho wokugcina ompompi bakho basekhishini abamnyama bebukeka behlanzekile eminyakeni ezayo.
Kungani Ngidinga Ukuhlanza Matte My Black Ikhishi Faucets?
Isizathu esisobala kakhulu sokuthi abantu bahlanze ompompi babo abamnyama be-matte ngesikhalazo sokubonakalayo. Lapho izindawo zamanzi nezinye izinsalela ezingaphezulu zingena ompompi bakho, ziphazamisa ukuhlanzeka, okubushelelezi, nokubukeka okukuhehe ekugcineni kwe-matte ekuqaleni. Ukuhlanza okulula kungabuyisa ompompi kokusha okufakiwe, ngaphandle kwenkazimulo yebhokisi.
Kwezinye izimo, noma kunjalo, ukulinda isikhathi eside ukuhlanza ompompi bakho kungalimaza nompompi. Uma okokusebenza kuthintana nama-acid, izincibilikisi, noma amanye amakhemikhali anamandla futhi bahlala etafuleni isikhathi esithile, bangadla baphele.
Kufanele Ngihlanze Kangaki Ompompi Bami?
Ngokuvamile, lapho umpompi wakho wasekhishini udinga ukuhlanzwa, uzokwazi ukuwubona ngoba uzobona amabala ngaphezulu. Ukuze wenze impilo ibe lula, kungcono ukumane ungeze ukuhlanzwa kompompi esimisweni sakho sokuhlanza masonto onke. Noma nini lapho uhlanza ikhishi lakho, nikeza umpompi wokuhlanza ngokushesha usebenzisa izinyathelo ezichazwe ngezansi.
Imikhiqizo Ephephile Yokuhlanza Oompompi Bakho Abamnyama
Yonke inhlobo yobuso ekhaya lakho, kufaka phakathi indawo yompompi, inemikhiqizo ethile yokuhlanza namathuluzi asebenza kahle namanye okufanele uwagweme. Okompompi bamakhishi abamnyama abamnyama, namathela kule mikhiqizo elula.
Amanzi Anensipho Engajwayelekile
Endabeni emnyama emnyama, ukukhetha okuphephile kokuhlanza kulula: amanzi ayisisekelo anensipho.
Sebenzisa insipho yokudla enesilinganiso se-pH - lokhu kusho ukuthi insipho ayinayo i-asidi. Mane nje uhlanganise inani elincane lensipho yesitsha ngamanzi futhi usukulungele ukuhamba.
Ama-Specialty Matte Surface Cleaners
Uma ungaqiniseki ukuthi insipho yakho yokudla i-pH ilinganisiwe yini, kukhona nokuhlanza okukhethekile okwenzelwe izindawo zematte. Uphawu oluyinhloko lwalaba bahlanzayo ukuthi awanawo noma yimaphi amakhemikhali ajwayelekile angalimaza ukuqeda ama-matte, esizoxoxa ngakho ngezansi.
Uma uhlanza umpompi wakho omnyama we-matte, weqa uboya bensimbi, amabhulashi aklwebhekayo, nezinye izinto bese ufinyelela indwangu ye-microfiber. Lezi zindwangu zithambile ikakhulukazi futhi zibushelelezi ngakho-ke zimnene ngokwanele ukuvikela ukuphela kompompi wakho.
Imikhiqizo Yokuhlanza Namasu Okugwema KuMatte Black Fixtures
Sonke sibe nezikhathi lapho besingenayo imikhiqizo yokuhlanza ebesiyidinga ngakho-ke senze okuthile ngokunye endlini. Lokho kungaba yingozi, kepha, uma ungazi ukuthi yiziphi izinto okufanele uzigweme ngokukhethekile. Gwema le mikhiqizo ngenkathi uhlanza ompompi bakho abamnyama be-matte.
Noma imuphi umkhiqizo one-Wax noma i-Agent Yokugcwalisa
Esinye sezici eziphawuleka kakhulu nesikhangayo sompompi abamnyama be-matte ukungabi bikho kwabo okuhlukile. Abakhiqizi bakhiqiza lo mphumela ngokunikeza ompompi ukwakheka kobuso obunemicroscopically rough, okugcwele izingqimba, izigaxa nezigodi.
Lapho ukukhanya kugadla kuleyo ndawo, ukuthungwa okunolaka kuyaphindeka futhi kukhanye ukukhanya kuzo zonke izinkomba ezihlukile. Lokhu kusabalalisa ukukhanya ngakho-ke akukho okubonakalayo okucacile.
Indlela ama-wax namanye ama-ejenti wokugcwalisa asebenza ngayo ngokugcwalisa ukungapheleli kwaphezulu, kwakheke indawo ethambile enokukhanya okucacile. Uma usebenzisa le mikhiqizo koompompi bakho be-matte, bazogcwalisa lawo magquma anenjongo kanye nezigodi ngaphezulu bese beshiya ompompi bakho becwebezela, futhi.
Khumbula ukuthi lo mphumela ocwebezelayo kaningi awenzeki ngokulinganayo, noma. Kungenzeka uphele ngama-splotches acwebezelayo ngokungafanele kumpompi wakho we-matte.
Noma imuphi umkhiqizo we-Caustic noma we-Acidic noma Imikhiqizo Kunokufaka ama-Solvents
Njenganoma yikuphi okunye ukuqeda, isiphetho esimnyama esimnyama sisetshenziswa ngokunembile ngumenzi. Imikhiqizo equkethe ama-asidi noma izincibilikisi ingaphula lokho kuphela. Lokhu kungaholela emibala engalingani noma ukusayina ukugqoka ekuqaleni kwempilo yakho yompompi.
Imikhiqizo Yokuhlanza Abrasive
Ama-acid nama-solvents akuyona ukuphela kwemikhiqizo engalimaza isiphetho esimnyama se-matte. Eminye imikhiqizo yokuhlanza yakhelwe ukuhlanza ukumosheka okuqinile ukuze ibe nama-ejenti wokuthumela imiyalezo njengama-microbeads. Gwema lezi zinhlobo zezixazululo zokuhlanza ngenkathi uzama ukuvuselela ompompi bakho.
Izindwangu Zokuhlanza Ezenziwe Ngomzimba noma Amabhulashi
Noma yikuphi ukuphela kompompi kungaklwebheka, futhi isiphetho esimnyama esimnyama asinjalo. Ngaphezu kokuqaphela izindandatho, okhiye, nezinye izinto eziklwebhekayo, gwema ukusebenzisa amabhulashi nanoma yiluphi uhlobo lwendwangu noma ithuluzi lokuhlanza elinokuthungwa okunzima.
Ngazi Kanjani Uma Umkhiqizo Wami Wokuhlanza Uphephe Ezintweni Ezimnyama Zokulungiswa?
Kuthiwani uma unomkhiqizo ongekho ohlwini oluthi “do” noma “musa” ngenhla? Wazi kanjani ukuthi iphephile?
Ekugcineni, kungcono ukuthi ungazibeki engcupheni. Imikhiqizo eminingi "yezinhloso zonke" njengabahlanzi abajwayelekile izoqukatha inani elithile le-asidi. Uma ungeke uqiniseke ukuthi umkhiqizo ulinganiselwe nge-pH noma uma kukhona amakhemikhali ohlwini lwezithako ongazi ukuthi luphephile, cacisa.
Manje njengoba usunohlu lwakho lwemikhiqizo yokuhlanza ephephile nephumelelayo, uwahlanza kanjani ompompi bakho basekhishini abamnyama? Landela lezi zinyathelo ezilula.
1. Hlanganisa Isixazululo Sakho
Kubantu abaningi, isixazululo sabo sokuhlanza kumane kuyinsipho yokugeza namanzi. Gcwalisa usinki wakho noma ibhakede ngamanzi, engeza udoti wensipho, bese uyizulisa ngesandla ukuze uyixube.
2. Hlanza izindawo ezingaphandle
Ngesisombululo sakho sokuhlanza silungisiwe, gcwalisa indwangu yakho ye-microfiber kusixazululo sokuhlanza. Ngemuva kwalokho, ikhale bese uyisebenzisa ukusula ingaphandle ompompi bakho nezinto ozifakile.
3. Hlanza Ngaphakathi Kwompompi
Ngemuva kokuhlanza ingaphandle kompompi, gijimisa indwangu yakho naphakathi kompompi. Uma ompompi une-aerator, qaphela ukuthi ungasebenzisi ingcindezi eningi ukuze ungalimazi i-aerator.
Kubalulekile ukwenza lokhu ngemuva kokuhlanza ngaphandle ompompi bakho, hhayi ngaphambili. Kungaba khona amadiphozi nezinhlayiya ezakhiwe ngaphakathi kompompi bakho, futhi awufuni ukuthi lezo zinhlayiya ziklwebhe noma zinamathele ekugcineni kwangaphandle.
4. Hlanza futhi Umise
Ngemuva kokuthi usule ompompi bakho ngesixazululo sakho sokuhlanza, qiniseka ukuwageza ngamanzi amasha ukuze ungashiyi noma iyiphi insalela ngemuva. Ekugcineni, sebenzisa ithawula le-microfiber noma indwangu ye-microfiber ukomisa ngaphandle kompompi.
Le nqubo ayithathi ngaphezu kwemizuzu embalwa futhi kungenzeka ibe ngomunye wemisebenzi elula yokuhlanza ekhaya lakho. Noma kunjalo, ukuhambisana nayo njalo kungenza umehluko omkhulu ekugcineni ompompi bakho bebukeka njengabasha.
Ngiwasusa Kanjani Amachashazi Amanzi ku-Matte Black Ikhishi ompompi?
Izinyathelo ezingenhla zisebenzela imfucumfucu ye-run-of-the-mill nokungcola ompompi. Ngezinye izikhathi, noma kunjalo, ungaba nezindawo zamanzi eziphikelelayo okunzima kakhulu ukuzisusa. Uwasusa kanjani la mabala anenkani?
Ngompompi abamnyama be-matte, inketho engcono kakhulu isisombululo se-50% uviniga namanzi angama-50%. Sebenzisa lesi sixazululo kancane ukusula izindawo zamanzi, bese ugeza ngokushesha ompompi ngamanzi ahlanzekile bese uwomisa ngendwangu ye-microfiber.
Khumbula ukuthi ezinye izindawo zamanzi ziphikelela kakhulu kunezinye. Zama ukuhlanza izindawo zakho zamanzi ngesixazululo sesephu yesitsha noma isicoci sokuqeda matte esikhethekile kuqala. Sebenzisa kuphela isisombululo seviniga uma ezinye izinketho zingasebenzi.
Ukuhlanza i-Aerator kuma-Matte Black Faucets akho
Izinyathelo ezingenhla zilungele ukuhlanzwa okujwayelekile kwepayipi elimnyama le-matte. Kodwa-ke, uma ompompi wakho une-aerator, uzodinga ukuhlanza i-aerator ngezikhathi ezithile, futhi.
I-aerator ibukeka njengesikrini esincane ngaphakathi kompompi wakho. Ama-Aerator ahlunga amanzi akho njengoba ephuma ngenkathi engeza nomoya othile ekusakazweni kwamanzi. Lokhu kunikeza ukusakaza ukuthungwa okushelelayo.
Kungani Ngidinga Ukuhlanza I-Aerator Yami Yekhishi Ekhishi?
Njengoba ierator ingasiza, ingxenye yomsebenzi wayo ukuhlunga izinhlayiya nokufakwa emanzini. Lezo zinhlayiya azinyamalali; bangakwazi ukwakha ngaphakathi noma ngaphakathi kwe-aerator. Lokhu kungenza kube nzima ukuthola amanzi ahlanzekile, futhi kwezinye izimo, izinhlayiya zingakha ngokwanele ukuvimba ukuhamba kwamanzi kusuka kumpompi wakho.
Kufanele Ngiyihlanze Kangaki I-Aerator Yami?
Uma une-aerator ompompi wakho, isimiso sakho sokuhlanza kufanele sincike ekutheni uyisebenzisa kangaki. Ngompompi osetshenziswa nsukuzonke njengompompi ojwayelekile wasekhishini, zihlose ukuhlanza i-aerator kanye ngenyanga. Okompompi abangasetshenziswanga kaningi, ukuhlanzwa njalo ngekota kungasebenza kahle.
Uzophinde ufune ukuhlanza i-aerator yakho noma kunini lapho ibonakala ivaliwe. Uma ukugeleza kwamanzi ompompi wakho kwehlile, imvamisa kuyisibonakaliso sokuthi udinga ukuhlanza i-aerator yakho.
Ungayihlanza Kanjani i-Aerator Yompompi
Ukuhlanza i-aerator yakho kuyinkimbinkimbi kunokuhlanza umpompi wakho, kepha kusengenziwa ngaphakathi kwemizuzu embalwa futhi kuyingxenye edingekayo yokugcina izinto zakho zihamba kahle. Landela lezi zinyathelo ezicacile.
1. Susa i-Aerator
Ezimweni eziningi, i-aerator yakho izoba ngaphakathi kwesikulufa esikulayini ngaphakathi ekugcineni kompompi wakho ukuze ukwazi ukumane usule isikulufa salokho okufakiwe. Ungadinga ukusebenzisa impintshisi noma enye into ukubamba okufakiwe, kepha yiba mnene ukuze ungalimazi ucezu. Uma ungaqiniseki ukuthi uyisusa kanjani i-aerator yakho, ukubheja okuphephile ukuhlola imiyalo yomkhiqizi.
2. Lungisa Isixazululo Sakho Sokuhlanza
Njengokuhlanza ingaphandle lepayipi lakho, ungasebenzisa isisombululo esilula samanzi nensipho yokugeza ukuhlanza i-aerator yakho. Uma unesibindi esinzima ngempela, ungahlanganisa nesisombululo sezingxenye ezintathu zamanzi nengxenye eyodwa yeviniga.
3. Hlanza i-Aerator
Sebenzisa indwangu, indwangu, noma isiponji ngesisombululo sakho sokuhlanza ukuze ukhuculule i-aerator yakho. Kufanele ukwazi ukubona izinhlayiya zikhululeka, ngakho-ke hlanza i-aerator njalo ukuze ugeze lezo zinhlayiya. Ungasebenzisa futhi isixubho esidala ukungena ezikhaleni ezincane ngaphakathi kwesikrini se-aerator.
Uzokwazi ukutshela ukuthi i-aerator ihlanzekile ngokubheka okulula okubukwayo. Yinikeze okokugcina ukugeza bese uyomisa ngendwangu ehlanzekile noma ithawula.
4. Phinda uhlanganise isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Lapho i-aerator yakho ihlanzekile, sekuyisikhathi sokuyibuyisela ndawonye. Faka izinto ngaphakathi kwesikulufu ngendlela efanayo ezazikhona lapho uziqaqa bese ugoqa okufakiwe emuva ekugcineni kompompi. Uma ungaqiniseki ukuthi wenza kahle, hlola imiyalelo yomkhiqizi wakho wepayipi.
Ukulandela lezi zinyathelo njalo ngenyanga noma njalo kuzokusiza ukugcina i-aerator yakho icacile futhi isebenza kahle, igcina amanzi akho ehlanzekile endleleni. Khumbula ukuthi uma ungakwazi ukuhlanza i-aerator yakho kahle, ungakwazi ukuthenga i-aerator engena esikhundleni somkhiqizi esikhundleni sokufaka lonke ompompi.
Ukugcina Ompompi Bakho Abasekhishini Abasanda Kuhlanzwa Futhi Bahlanzekile
Oompompi abamnyama beMatte banokubukeka okunethezeka, kwesimanje, okubushelelezi, yingakho bethandwa emakhaya kuzo zonke izifunda namaphoyinti entengo. Zibukeka zizinhle kakhulu uma uzigcina zihlanzekile futhi zinakekelwa kahle, noma kunjalo. Ngenhlanhla, lokho kulula njengensipho yesitsha, amanzi, nendwangu ethambile njalo ngesonto noma kunjalo.
Uma ucabanga ukufaka ezinye izindawo ekhaya lakho ngompompi abamnyama be-matte noma uma usazingela ompompi abaphelele basekhishini kwasekuqaleni, hlola imihlahlandlela yethu yokuthenga ompompi.
Kunconywe Imikhiqizo kaMatte Black Kitchen ompompi
I-Single-Handle Pull-Out Sprayer Ikhishi Lompompi
Izimpompi ze-Matte Black Kitchen Mixer
Edlule :: Ungayikhetha Kanjani ompompi Wokugeza: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga Olandelayo: Ukubuyekezwa Kwompompi Wendlu yangasese ye-Delta: Umhlahlandlela Wokuthenga wama-2021 Wompompi Bokugeza be-Delta
2021 / 02 / 04 12608
2021 / 02 / 03 12348
2021 / 02 / 03 8553
2021 / 01 / 28 10113
2021 / 01 / 27 6357